Seychelles dia mangalatra ny loka "Ny hazakazaka amoron-tsiraka folo mahafinaritra indrindra eto an-tany"
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles dia mangalatra ny loka "Ny hazakazaka amoron-dranomasina folo mahafinaritra indrindra eran-tany"
Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Sports • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Seychelles dia mangalatra ny loka "Ny hazakazaka amoron-dranomasina folo mahafinaritra indrindra eran-tany"
Ny nosy Seychelles dia nipoitra tamin'ny hetsika fandefasana IP amoron-tsiraka GorgeousRun manerantany tamin'ny 23 Mey tany Shanghai, nanala ny loka ho an'ny “Marathon Coastline Top XNUMX tsara indrindra eto an-tany”. GorgeousRun dia sehatra iray mampifandray ireo mpihazakazaka marathon sinoa amin'ny toeran-tsambo marathon hafa toa an'i Seychelles.
Ny Seychelles Eco-Friendly Marathon dia hetsika fanao isan-taona ekena iraisam-pirenena amin'ny alalàn'ny Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).
Ireo mpandray anjara avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao dia nifaninana teo am-pijerena fomba fijery kanto momba ny toerana mahafinaritra an'i Seychelles.
Ity hetsika fandefasana ity dia nahitana toeran-kaleha hafa toa an'i Maorisy, Tahiti, Israel, ary Jamaika.
Ny paradisa nosy dia niara-niasa tamin'i GorgeousRun haneho ny hatsarany voajanahary ary indrindra ny lalan'ny Marathon Eco-Friendly ho an'ireo mpihazakazaka marathon sinoa.
Ny Seychelles Eco-Friendly Marathon, izay hetsika fanao isan-taona ekena iraisam-pirenena amin'ny alalàn'ny Association of Marathons International and Distance Races (AIMS), dia ahafahan'ny mpandray anjara avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao hifaninana amin'ny fahafinaretana amin'ny fomba kanto ny toerana mahafinaritra eo amin'ny lalan'izy ireo.
Manoloana ny moron-dranomasina fotsy misy perila sy ala tropikaly. ny Seychelles Ny hetsika dia mampiantrano mpijery iraisampirenena amin'ireo tia marathon sy matihanina. Mitazona ny fanontana faha-12 amin'ny taona 2019, Seychelles dia nanoratra mpandray anjara vahiny iraisam-pirenena 65 avy amin'ny firenena 28.
Nanatrika ny hetsika GorgeousRun i Ramatoa Sun Yingjie, tompon-daka eran-tany vehivavy sinoa mpihazakazaka lavitra nandalo tamin'ny hazakazaka Seychelles Eco-Friendly teo alohan'ny platform GorgeousRun. Ramatoa Yingjie dia nizara ny zavatra niainany momba ny paradisa madio sy ny lalana Seychelles Eco-Friendly Marathon tamin'ny mpanatrika, nanentana ny hafa hahita ny hakanton'io toerana io.
Ny talen'ny birao fizahan-tany any Seychelles China sy Japan, Andriamatoa Jean-Luc Lai-Lam dia naneho hevitra hoe: "Fotoana nandinihan'ny tsirairay izany noho ny fipoahan'ny COVID-19 ary nanome fotoana anay hieritreretana ny fahasalamantsika izao mihoatra ny hatramin'izay. Nanomboka nampitombo ny fanazaran-tena fanazaran-tena izahay ary mandray anjara amin'ny hetsika fanatanjahan-tena bebe kokoa amin'ny fikatsahana ny fahasalamantsika. Ny Marey Seychelles Eco-friendly Marathon dia mamorona sehatra tonga lafatra ho an'ireo mpitsidika azontsika anaovana izany raha mbola miaina ny nosintsika mahafinaritra. Ho setrin'izany ny hetsika GorgeousRun dia manome antsika dingana tsara indrindra hahatratraranay ireo mpanjifantsika kendrena ao anatin'ny tontolon'ny marathon. ”